Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuvata wakapfeka hembhe
Kuvata wakapfeka hembhe
Kuvata wakapfeka hembhe iwe une murume/ mukadzi
Kune varume vari kubvunza kuti ko sei mukadzi wemumba achinovata akapfeka zvipfekwa asi ari mumubhedha umwe chete nomurume wake. Nyaya yakadaro zvoonekwa kuti mukadzi akadai anobudisirawo murume wake zvipfekwa zvokuvata nazvo kuti murume apfekewo vonovata vakadaro. Iyi inyaya inoitika mudzimba dzakawanda, zvikuru dzevanhu vane mari yokutenga zvipfekwa zvokuvata nazvo izvi.
Mubvunzo ndewekuti chinhu chakanaka here kudaro? Tichitarisa mavatire evanhu vakaroorana tinoona kuti umwe noumwe anowanika akasununguka pamabatire aanoita umwe wake mukuvata kwavo vese. Hino kana wakapfeka zvipfekwa kazhinji murume anopfeka rakaita sebhurugwa asi pamweri risina zipi, zvokuti mukadzi wake anokwanisa kupinza ruoko obata nokutambisa chombo semadire ake kana ada zvokurhojana.
Mukadziwo akokwanisa kupfeka hembhe huru yokuti murume akadawo kukwiridzira kumusoro zvokuti makumbo nemagaro zvisare zvakashama anokwanisa kuzviita pasina dambudziko. Sokuona kwangu kana zvipfekwa zviri zvakadai hapana chinhu chingahi chakaipa pakupfeka uvete.
Nyaya iri kubvunzwa pano ndeye vanhu vanoti vamboroorana vakagara nguva refu pasina anopfeka chinhu pakunovata, kozoita umwe musi wekuti mukadzi/murume anongobva kunoshopa obva aunza zvipfekwa zvemumubhedha obva atozvipfeka pasina zvabvumiranwa. Ndipo panotangira nyaya dzevanhu vanonyora mwadhi vachikomburena kuti zvaitigwei.
Mumba zvinhu zvese zvinoda kuitwa nokubvumirana. Asi kungoti isu nevarume vedu kazhinji hatigoni kubvumirana pazvinhu zvakamisa imba. Varume vakawanda vanoona sokuti kubvumirana chinhu nomukadzi zvinotaridza kuti hauna samba mumba. Vanoda zvokungoita sokuti tiri muARMY pana Komandha umwe chete nesoja rake rimwe chete raanongoti akadaidzira kuti ita ichi kana icho chinoitwa pasina mubvunzo.
Zvozomushamisa ava kuona soja riya rapfeka bhurugwa mumubhedha risina kuudzwa kuti pheka bhurugwa. Kusawirirana kotanga. Uyavo mukadzi nengari yokusagona kutaudzana nomurume zvakanaka anongotsamwa kana aona zvakaipa zvaitwa nomurume. Pakutsamwa uku haachaudzi murume kuti akatsamwei. Murume ofunga kuti kuda pane zvaitika kuzhe kwemusha zvisinei naye onyararawo pane kubvunza mukadzi wake kuti zvaita sei. Zvadaro mukadzi ofunga kuti akanyima murume zvinhu murume anobva afunga kumubata zvakanaka. Pane kungoudza murume kuti Shamwari zvinhu hapana kusvika tataudzana zvakanaka panyaya iyi neiyo, muadzi anongonotorana nemazihembhe aakasiyana nawo musi wemuchato opfeka opinda mumubhedha.
Nyaya iri pano haisi yokuti vanhu vanopfeka zvipfekwa zvokuvata nazvo asi ndeyokupfekerana zvinhu pakunovata, zvinhu izvi zvange zvisingasipfekwi mazuva ese uye pasina kuti umwe wako pane chaanoziv nazvo. Ipapa ndipo pane nyaya.
Ukabvunza vanhu zvikuru vanhukadzi kuti sei vachipfeka zvipfekwa pakunovata unohwa nyaya dzakawanda.
1 Ndopfeka kuitira kuti kana imba ikabata moto ndisatiza ndisina hembhe.
2 Kuvata usina hembhe zvakangofanana nemombe ivete mudanga.
3 Ndinovata nehembhe kuti murume awane chokukumura pakuvatana
4 Kuona ndakapfeka hembhe dzakadai kunoitisa murume wangu zemo.
5 Handidi kuti murume wangu aone kuunyana kwemuviri wangu saka ndichipfeka izvi.
6 Kutya kuti ndikasura zvinyoro kana kuvhinza chitubu ndosvibisa mashitibheta
7 Kana ndiri kumwedzi.
Ukazobvunza munhu kuti akapendisira kuita zvese zvinomutyisa kuita avete riini unohwa oti haana kumbozviita asi anotya kuti zviitike. Hino kuvata wakapfeka zvinhu uchitya kuti imba ikabata moto ungazotiza usina chawakapfeka hazvina musoro nokuti imba ikabata moto iwe urimo nhumbi dzawakapfeka dzinokwanisa kubatawo moto. Nati kutovata usina zvawakapfeka.
Musikana kana angoti kurei anovata akapfeka bhurugwa. Vakomana chete ndivo vanowanzovata vasina kupfeka zvachose. Kana wazoroogwa watanga kuvata nomurume, zvikuru mazuva okutanga muchimukirana kaviri kana kataru usiku, zvokuvata wakapfeka hazvikwansiki. Pedzezvo mukaramba mune rudo unojaira kupinzwa chombo uvete kana kuti wakasvinura usiku, zvokuti pamwe ukashanyarika murume avete unotokwidza gumbo kuseri kwemurume kuti apinze chombo ipapo uri kuhope iyewo ari kuhope mozopepuka chombo chava mukati, pamwe kusatombopepuka. Unoita makore nyaya yenyu isina ambofunga nezvokupfeka zvinhu mumubhedha. Saka zvinozotanga sei?
Mazuvano matangire azvo akawanda. Nguva yatiri ine zvakawanda zvinokwanisa kuitika.
1 Umwe amboshanya anodzoka achiwana uya asaya ava kupfeka avete.
2 Ukasiya mukadzi muri mune imwe nyika anosara opfeka avete.
3 Kana umwe agwara uya muchengeti anoziva kuti usiku anomuka achiriritira umwe wake saka nani kuvata wakapfeka
4 Murume akakuhurira iwe usina kwekutizira, unogara hako asi wovata wakapfeka kuti asakupa zvigwere.
5 Kana kuchitonhora musina magetsi, munopfeka kuti mudziigwe
Zvoitwa sei kana mukadzi/murume wako akupfekera iwe usingazivi kuti chii chaipa. Kana ichida kupokana nomurume/mukadzi wako, chinja nyaya dzokuvata pasina bvumirano. Munhu ajaira kuti tinovatana tisati tabatwa nehope anoda kupiwa chikonzero chokuti sei zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kune vakadzi vasingakwanisi kutaudzana nevarume vavo zvokuti chero ane zemo haakwanisi kuudza murume zvaanoda. Mukadzi akadai anomirira murume kuita zemo iye ongoziva zvokuita pakuhi vhura. Mukadzi akadai akazoonekwa apfeka zvinhu mumubhedha zvinotyisa murume.
Varumewo kungoerekana murume wako akupfekera pasina chawaita chaunoziva zvinovhundisa uye zvinoreva zvega kuti nhasi hapana chinoitika pakati pedu. Ndiko uchiona vanhu vachinyora vachibvunza kuti ndotangira papi umwe wangu ari kuvata akapfeka zvinhu.
Vanhu gadzirisai nyaya dzenyu noumwe mukana kwete kutanga nokupfekerana pakunovata. Kana une chigumbu pamoyo, zvichikunetsa kutaura, wana umwe mukana wekuudza umwe zviri kukudya moyo. Kumupfekera pakunovata kutowedzera dambudziko rako zvokuti unokwanisa kutotanga imwe nyaya tsva yauingakwanisi kuzobatanidza neiya yawagara unayo.
1 Nyora mwadhi upe murume, mukadzi wako averenge.
2 Kumbira tete vakugarisei dare
3 Udza munhu nokumubvunza mibvunzo unonanga kwauri kuda kuenda.
Chinoita kuti nyaya yokupfekerana iite nyaya ndechokuti kana muchivata mese musina kupfeka zvinoreva kuti muri kuudzana kuti imwe noumwe anokwanisa kuita zvaanoda nomuviri weumwe. Varume vanofunga kuti muviri wemukadzi chinhu chinoshamisira. Unoona murume mukuru achiti kana oda hope anoisa ruoko pazamu romukadzi wake napo napo otoridza magwiriri. Musi waanoshaya zamu iroro nokuda kwekuti wamupfekera hembhe ndiwo musi waanofuma muromo uri mumhino nokusvotwa nazvo.
Isuwo vakadzi kuvata wakagumbatira murume wako musina kupfeka zvinopa SECURITY yokuti hauna chinokudya moyo. Kuti pepu murume wako achimwa zamu avete hope chinhu chinotaridza rudo. Kugonyerana muvete wopepuka murume akamira chombo chiri mumagaro ako iye avete zvikutiwo ukangoti suduruke gumbo simudzei anopinda, chinhu chakanakawo hacho. Hino musi waanokupfekera zvoita sokuti ari kukuudza kuti chinzvwimbo chako mumba muno hauchisina. Simba romukadzi pamusha rinobva pakukudzwa nokukosheswa nomurume. Muviri wemukadzi newemurume kuitirana havi chinhu chikuru pamusha.
Saka kana tosvotesana kusvika pakupfekerana hembhe mumubhedha zvoreva kuti RELATIONSHIP yava kuda kupera. Ndosaka ichizoita nyaya.
Ini sokuona kwangu, nguva yokuvata inguva yokuti mukadzi nomurume vanowana nguva yokuva munhu umwe chete. Vanobvisirana hembhe vombundikirana voterera moyo yavo inotinhira pamwe chete kureva kuti vanhu vaviri havo asi paupenyu nomurudo munhu umwe chete. Kana usina kuhwisia nyaya iyi hauna kuhwisisa chikonzero chokuti uve munhu akaroorana noumwe. Zvikuru vanhukadzi. Munhukadzi ane murume munhu anofanira kuhwisisa nyaya dzese dzemagarire emumba.
Kuhi mai vemba zvinoreva kuti une mabasa akawanda. Uri mai vemhuri yese zvese nomurume wako. Pakunovata murume anopiwa nguva yakewo yokuva pamwe chete nomukadzi wake. Muviri wako pa 8 Hours dzokuvata ndewenyu mese. Rega murume ave pedo newe pamoyo, pafungwa, panzwimbo. Kana mune simba razvo munorhojana henyu kuri kutsvaka mukana wekuva munhu umwe chete. Ukaona murume achikupinza chombo, hwisisa chikonzero chacho chinoitisa varume kuda kuva mukati memukadzi wake zvokuti ukamurambira anoshungurudzwa nazvo.
Pamwe musina hembhe kudai unopepuka murume akati twii asi uku avete hope, wapepuswa nokugogonegwa makaro nokumira kwake. Kana usina hembhe kudai unongosimudzira gumbo wogonya wonangisa murume wako wotohwa tyotyotyo kupinda. Chero ukada kumubudisa urume chero ukasada chinhu chakangonakawo kuhwa murume wako ari mukati mako. Hino kana mune ano mazisaga amakapfeka, hapana chinoitika. Nani mutovata henyu uyu kwake uyu kwake.
Varumewo, dai maiterera nyaya dzedu mukahwisisa kuti mukadzi anobvisa hembhe ovata akashama nomurume wake, ovhurira murume wake makumbo, osimudzira chiuno kugamuchira chombo chomurume, dai maizama kuhwisisa kuti anozviitirei, uye kuva pamwe chete nomurume wake zvinokonzerei mufungwa, mumoyo uye mumuviri wake, maizviita mune rukudzo pavakadzi venyu. Maizohwisisazve kuti sei kushaikwa kwenguva iyi mumba kuchikonzera kushungurudzwa.
Murume nomukadzi vanopanana nguva yokuvata iyi vasina hembhe uye vakasununguka pamaitire avo pamiviri yavo, vanhu vanogarisana vasina matambudziko akawanda kana kufungirana kwakaipa, kana kusvotesana, kana kusahwisisana mumba.
Ngatihwisise kukosha kwezvinhu zvidikidiki zvemumba.
Kana wange wakajaira kuvata wakapfeka, imbofanoudza murume wako kuti nhasi unoda kuvata usina chawakapfeka nokuti une zemo. Zvadaro fungwa yomurume achiti "kana asina hembhe ane zemo." Zvinhu zvombowedzera kwenguva.
Posted by Mai E Chibwe at 08:15
Kubva zera usina mukadzi/murume
Nguva yokupokana mumba
Kugara Usingazivi Status Youmwe Wako